Cali Cabdullaahi Cosoble oo shaaciyay xiliga uu soo Magacaabayo golihiisa Wasiirada – STAR FM SOMALIA
Cali Cabdullaahi Cosoble oo shaaciyay xiliga uu soo Magacaabayo golihiisa Wasiirada
Madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Cosoble oo dhawaan dib ugu laabtay magaalada Jowhar ayaa ku mashquulsan magacaabista golaha Wasiirada maamulkiisa oo la filayo in saacadaha soo aadan uu ku dhawaaqo.
Waxa uu sheegay Madaxweynaha in uu soo gabo gabeeyay inta badan wadatashiyadii ku aadanaa magacaabista golaha Wasiirada, waxa uuna tilmaamay in uu ku dhawaaqayo wasiiradiisa kahor 22-ka bishan oo ku aadan caleemo saarka Madaxweynaha Soomaaliya.
”Waan soo gabo gabeeyay inta badan wadatashiyadii ku aadanaa magacaabista golaha wasiirada, waxaana soo magacaabayaa wasiirada saacadaha soo aadan kahor inta aan la gaarin caleemo saarka Madaxweynaha Soomaaliya” Ayuu yiri Madaxweyne Cosoble.
Madaxweynaha Hirshabelle ayaa bilooyin badan ku qaadatay in uu soo magacaabo golaha Wasiirada maamulkiisa, waxaana la filayaa in Wasiirada maamulka Hirshabelle Jowhar looga dhawaqao saacadaha soo aadan.
Madaxweynaha Hirshabelle oo magacaabay Golihiisa Wasiirada